आफ्नी आमाको जन्मदिनको विशेष दिनमा साराले आफ्नी आमा र भाइ इब्राहिमसँगको पारिवारिक तस्विर साझा गरेकी छिन् साथै साराले लेखिन इमोशनल पोस्ट! – News Nepali Dainik
आफ्नी आमाको जन्मदिनको विशेष दिनमा साराले आफ्नी आमा र भाइ इब्राहिमसँगको पारिवारिक तस्विर साझा गरेकी छिन् साथै साराले लेखिन इमोशनल पोस्ट!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २७, २०७७ समय: १९:२१:०७
बलिउड अभिनेत्री सारा अली खान सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय रहन्छिन् । उनी प्रायः आफ्नो परिवारका फोटो साझा गरिरहन्छिन, साथसाथै छुट्टीको फोटोशूट पनि साझा गरिरहन्छिन् । सारा आफ्नी आमा अमृता सिंहलाई निकै माया गर्छिन्। आफ्नी आमाको जन्मदिनको विशेष दिनमा साराले आफ्नी आमा र भाइ इब्राहिमसँगको पारिवारिक तस्विर साझा गरेकी छन्, जुनमा यी तीनले ट्वीनिंग गरेका छन्। अमृता सिंहको फेब्रुअरी ९ मा जन्मदिन हो। लाखौंको मनमा राज गरेकी अमृता ६३ वर्षकी भईसकेकी छन्।
साराले साझा गरेर आफ्नो आमालाई जन्मदिनको शुभकामना दिईन, साथै एक इमोशनल पोस्ट पनि शेयर गरेकी छन्। साराले लेखेकी छन, ‘मेरो संसारलाई जन्मदिनको शुभकामना! मेरो ऐना, मेरो तागत र प्रेरणा बन्नुभएकोमा धेरै धन्यवाद !’ साथै साराले उनलाई निलो रङ मनपर्ने कुरा बताईन्। साराले थुप्रै ह्याशट्याग पनि साझा गरेकी छन्। जुनमा उनले लेखेकी – जस्तो आमा उस्तै छोरी ।
यस तस्वीरमा छोरी र आमाको माया देखाईएको छ। साथै दोस्रो फोटोमा इब्राहिम पनि आमा र दिदि जस्तै पोज दिईरहेका छन् । सबैलाई थाहा छ कि इब्राहिम र साराको हेरचाह अमृताले एकलै गरेकी हुन्। एकलै आमा अमृताले आफ्नो बच्चाको निकै राम्रोसँग ख्याल राखेकी छन्। साथै उनीहरुको ईच्छा आकांक्षाहरुको पनि पूरा गरेकी छन्। अब सारा बलिउडमा आएदेखि उनी सारामाथि गर्व महसुस गर्छिन्।
Last Updated on: February 9th, 2021 at 7:21 pm